Ebe nkiri Gaborone - Botswana - 1aviagem.com
Gara aga post: Kedu ka anyị ga - esi merie agha ụwa nke atọ? Azịza ya nwere ike ịdị n'akụkụ gị.
Nzipu ozo: gini ka enwere ike ịnweta ugbo ala nke ndi mmadu n’efu? - Estonia - Tallinn
Edebere 28 January 2020 site Römulo Lucena
Na njem mbụ m gara Africa ekpebiri m ịgafe South Africa na Botswana. Ka emechara, Brazil dị obere site na mpaghara Africa. Ya mere odi ka odi nma ka agafe oke ma hu ma Botswana di otua na South Africa ma obu adighi. Enwere m afọ ojuju n'ihi nsonaazụ ị na-eso ugbu a.
* Maka ndị Brazil ọ dịghị mkpa iwere Visa, ọ dị mkpa ịgabiga omenala na ịnweta akara ntinye. A na-akwụkwa Pulas 25 (BTW) akwụ ụgwọ maka stampụ na paspọtụ ahụ.
* Kpa, ọ bụrụ na ịnwere paspọtụ mberede, mgbe ahụ ọ bụ iwu na ị ga-enweta visa tupu ị laa.
Enwere ike ịchọta ndepụta nke mba ndị chọrọ visa iji gaa na Botswana na weebụsaịtị ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ:
** Ọ dị mkpa iweta asambodo mba niile nke ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa odo.
Ugbu a ịmara etu esi abanye na mba Botswana, ị nweelarị visa gị, akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi, akwụkwọ akara paspọtụ gị ma ị gaala na ebe nrụọrụ weebụ ndị nnọchi anya gọọmentị dị n'elu, ka anyị gaa njem!
Ihe a ga-eme na Gaborone?
Ihe mbu ị ga - eme na Gaborone bụ iche na ịnọghị na South Africa, ọ bụ ihe ọchị ebe enwere mgbanwe mgbanwe omume ndị mmadụ na bọs. E mepụtara ikuku ọhụrụ, nke a kaa akara na anyị nọ na obodo ọhụrụ, dị iche na South Africa, nke nwere omenala na ọdịbendị nke ya. Ọ bụ ihe nwute na amachibidoro eserese ókèala ya, yabụ ụzọ ga-eju ndị nọ n'ụgbọ ala afọ ojuju
2- Zute ma ọ dịkarịa ala ụmụ amaala Botswana abụọ, ma ọ bụ Botswana…
Kedukwa ihe kpatara nke a na ndepụta nke ihe aga-eme na Gaborone? N'ihi na ha masịrị m!
Obiọma ya na nnabata ya na ndị ọbịa si mba ọzọ abụrụ nke ndị nkịtị. Mụ na ha bara uru na klas. Ihe dika ilu nke ezigbo onye Sameria. N'okwu a, abụ m ihe achọrọ. Na ndepụta nke mba ndị nwere nnabata kacha mma (nke m nọrọ na ya, ọ bụghị n'ụwa niile), aga m etinye ha n'ọnọdụ mbụ na mba ndị ọzọ na-anabata ndị njem nleta nke ọma. Dị ka ndị Canada, ndị Cambodians, ndị Brazil na ndị Botswans ugbu a.
Ọbụna tupu anyị erute n'ókè ahụ, ndị mmadụ nọ na bọs ahụ nwere omume ha na-emebu. Mgbe ha bụ enyi, ha na-ekwu okwu n'okporo ụzọ, mgbe ha amaghị ibe ha, ha na-agbachi nkịtị. Ma mgbe ihe karịrị awa 2 nọrọ na ókèala ahụ, nke isiokwu ya bụ iji nyochaa ọnụ ọgụgụ mmadụ na nyocha nke bọs ahụ na oge gbanwegharịrị njem anyị site na awa 7 ruo awa 9,5, ezutere m di na nwunye mbụ Botswano. Mompati na Kehiloe. (Enwere m olileanya na enwetara m ya). Mompati bụ onye mbụ welitere okwu ahụ. O kwuru na ya na-alọta ụlọ chọrọ ịmara ihe onye njegharị na Brazil ga-eme na Gaborone. Kedu ebe m ga-agbago ụgbọ ala. M zara ya na amabeghị m ihe m ga-eme, na m ga-agbago n'ọdụ ụgbọ ala ikpeazụ na ọdụ Gaborone. N'ebe ahụ, m ga-achọ wifi ịmalite Uber ma gaa n'ụlọ nkwari akụ.
Ọ bụ mgbe ahụ ka “anwansi” ahụ mere. Ọ hụrụ na amachaghị m ihe gbasara obodo ahụ ma dịrị njikere inyere m aka.
Mamapati kọwara m na Uber anaghị arụ ọrụ ebe ahụ. Na m ga-achọ ntinye nke ime obodo. Ọ gwakwara m na enweghị wifi n’ebe ọdụ ụgbọ ala ahụ dị. (n'oge na adighi anya ike agaru m na họtel.
Mana ọ gwara m ka m ghara ichegbu onwe m, gwa Kehiloe okwu na ọ dị njikere ịkpọ ụlọ nkwari akụ m Terra Cotta View Guests House. Ha kwenyere na m ga-agbadata otu isi tupu oge ikpeazụ ma na ndị ọrụ na họtel ahụ ga-eburu m ebe ahụ. Ha kọwakwara na enwere igbu oge na ókèala ahụ, ọ bụ ya mere na abịabeghị m.
Mompati na Kehiloe emeela ihe karịrị ezigbo ọrụ. Ha zọpụtara m ịbanye na nsogbu n'ihi na enweghị m akara ekwentị, ọ nweghị ụzọ m ga-esi gaa n'ụlọ nkwari akụ ahụ na enweghị “jumps” nke bụ ego mpaghara. ihe niile m nwere bụ ekwentị na batrị 10% na 5 "rands" na obere akpa m, nke a gbakwunyere n'eziokwu na amaghị asụsụ obodo. Dịka ha si dị, m ka na-eme atụmatụ ịpụ ebe ahụ dị oke njọ na Gaborone (ọdụ ụgbọ ala). Ọ bụkwa oké ọchịchịrị. ọ bụrụ na ekpebiri m ịga ụkwụ.
Tupu o nyefee ya n'aka ndị ọrụ n'ụlọ nkwari akụ Mompati, ọ tụbutara m aro: “Ọ bụrụ na ị ga-enwe, nwee abeụ bekee na Gaborone, ị ga-enwe mmasị na ya”. O kwuru asusu m, o nweghi ihe dị mma karịa ịkpụ ụgbụgbọ?
Enwere m ike ikwu n’ezie na Chineke mere ka m nwere onwe m n’ihe egwu wee nabata m mba ọhụrụ a na-abịa.
3- nọrọ na Terra Cotta View Guest House
Ya mere ugbu a enyefela onye nlegharị anya Brazil a ka ọ na-elekọta ndị ọrụ na họtel ahụ.
Ha (Modiri na Maggie) cheere ogologo oge, lee?! Site na oku izizi rue mbata ụgbọ ala, nnukwu oge agafeela. Ma ike agwụghị ndị njem ahụ na Brazil na-eji akwa oroma. Ee, ọ bụ otu a ka m siri mata m na ha (Na akpa mmanụ oroma). Ha chere ruo mgbe m rutere wee buru m gaa na họtel. Oge eruru mgbe anyị rutere, naanị ihe m chọrọ bụ ịsa ahụ ma zuo ike.
4- Gaa na Riverwalk
The Riverwalk bụ ụlọ ahịa ebe ị ga - edozi ndụ gị tupu ịmalite ịmalite ịgagharị obodo ahụ. You nwere ike iwepụ ego (ego mpaghara) na mgbanwe ego ma ọ bụrụ na ezuru Rands si South Africa ma chọọ ịkwaga Pulas. Enwekwara ebe ị ga-eri, ọrụ na ụlọ ahịa iji zụta mgbawa ekwentị, ka ị wee nwee mgbaama ma laghachi ebe ị nọ.
Ekwentị mgbawa mgbawa Dị ka ọ dị ka ebe ọ bụla n'ụwa, mgbawa ekwentị na-ewe oge iji debanye aha ma nọsie ike. E.,. ọ dị nwute na enwechaghị m oge iji chere ka mgbawa ọhụrụ ahụ rụọ ọrụ. Ọ na-ewe awa 48. Na ebe a bụ ihe mmụta ọzọ na ịdị n'otu site n'aka ndị Terra Cotta nke Botswana. Ndị ọrụ ahụ dị njikere inyere m aka n'ezie! Nwoke ahụ gbazinye m mgbawa nke ya, yabụ m ga-enweta mgbawa, ma ihe ọ bụla m nwere ike ịkpọ ụlọ oriri na ọ hotelụ .ụ ahụ. Ọzọkwa, imeghe ekwentị m, Refilwe gbazinyere m ntị ntị ya. n'ihi na ekwentị na-emepe naanị ihe dị ezigbo mkpa iji wepu mgbawa.
× Wepụ anya njikere
Na Gaborone anyị nwere ụmụ nwoke!
Ha niile chọsiri ike ịma ihe m ga-aga ikwu okwu ndị ọbịa. Enwere m olile anya na a ga-enwe bọs ndị njem nke ga-ewe obere njem n'obodo, dịka anyị nwere na Johannesburg, Cape Town, New York… Ọ dị nwute, ọrụ a adịbeghị na Gaborone. Yabụ na Modiri mgbawa arụnyere m bidoro nyocha. Ọ bụkwa ebe ahụ ka edemede a niile si pụta!
Modiri si na họtel ahụ, haziri oche ndị ahụ n'usoro nke ga-enwe nghọta maka edemede.
Maggie nyekwaara aka nke ukwuu site na ịrịọ maka ngwa mpaghara, dịka Uber, ụgbọ ala nwere ederede ahọrọ. O wepụrụ ụgbọ ala a n'onwe ya, na-enye ihe ngwọta iji kpọọ onye ha maara. N'ihi na ọ chọpụtara na onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwere obere ihe. Nke a nyere m ohere ịmara Mofat. Mofat bu aha ndi mmadu ndi mere dika onye nleta obodo. Ya na ụgbọ ala ya dị ike pink napụtara ụbọchị ahụ!
5- Gaa na Botusana Museum (Botswana Museum)
Tslọ ihe ngosi nka nke Botswana dị na Gaborone na-ewetara anyị nkọwa dị iche iche na-egosi anyị otu mba a si nwee ụdị mmekpa ahụ karịa ndị ọzọ gburugburu ụwa.
N ’ebe ngosi nka ị kari ihu ocha nke Kgotla. Gini bu Kgotla? Ọ bụ oghere ọhaneze emere maka nzukọ na mkparịta ụka nke isiokwu dị mkpa. N'ebe a, onye ọ bụla, n'agbanyeghị agbụrụ nwoke, ụcha akpụkpọ ahụ ya, okwukwe okpukpe, wdg, nwere ike juo ajụjụ ka ndị mmadụ họrọ ya. Ọ rụrụ ọrụ dị ka ụlọ omebe iwu ọha, nke kama ịnwe ndị omeiwu, ọ bụ ndị mmadụ n'onwe ha hoputara. Site na mgbe o guzobere ya dika Republic, Botswana ekwere na ochichi onye kwuo uche ya ya na ndi mmadu nwere ike itule nke onwe ha. Mụ nwanyị nwere ikike inwe oke, dịkwa ka ụmụ nwoke, ma ahọpụtara ụfọdụ n'ime ha ka ha bụrụ ndị isi nke ndị mmadụ na ebe a. (ndị isi, ma ọ bụ dịka ha kpọrọ ya, Kgosi)!
N'ime ebe ngosi ihe mgbe ochie anyị nwekwara ihe atụ nke ụgbọ ehi, na ụgbọ oloko na ụlọ nke oge ahụ.
6- Gaa Leta ncheta Dikgosi atọ na CBD.
Akụkụ etiti nke CBD nwekwara ọtụtụ ihe gbasara Botswana. N'ime ya anyị nwere ncheta: "Ihe ncheta Dikgosi Atọ" nke bụ ndị isi atọ ahụ: Khama III Sebele I na Bathoen nke ndị bụ maka mbubata nke mpaghara obodo a. Nke ọ bụla na-anọchi anya ebo dị iche. Tupu mgbe ahụ, ha dị iche iche wee na-achị dị ka ndị eze nke ebo. Mana mgbe ọ hụrụ na enwere ọganihu site na mgbago ugwu na ndịda ala ya. Na ha nọ n'okpuru ngalaba Bekee, ma ghọta na echiche nke obodo ukwu bụ ime ka ha kewaa iji nwee ike ịga n'ihu dịka ọchịchị, na-enyocha ala ha. Ha kpebiri na ha ga-ezukọta wee gaa UK, gwa Queen na Chancellor ka ha kwuo maka kewapụ onwe ha na mpaghara ebe ọ bụ na Zimbabwe na ụlọ ọrụ South Africa, a na-akpọ ókèala ọhụrụ ahụ Benchanaland protectorate. . Mgbe ha kewasịrị ma kwatuo ikike nke ókèala ha, nke nwere iyi egwu nke sitere na Zimbabwe na South Africa, ma, iji nwere onwe ha pụọ ​​na United Kingdom, ha wepụrụ ocheeze ha ma guzobe Republic of Botswana. (na 1960).
N'ogbe a, enwere ike ihu ndi ndu ndi ozo nyere aka guzobe na nnwere onwe nke Botswana.
Boitshoko (Ntachi obi)
Maikarabelo (Ọrụ Dịịrị)
Boipuso (Nnwere Onwe)
Botswana Craft bụ ebe a na-ere ọrụ aka mpaghara, ị nwere ike ịchọta ihe ncheta dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche, ihe na ọnụahịa.
8- Nwee nri ehihie na Linga Longa
Anụrụ m anụ banyere ịmịkpọ ahụ, m kpebiri ịnwale anụ emere emere. Ma, le, ọ bara uru! Chee echiche banyere anụ dị ụtọ na nri ndị e ji akụkụ mee. Nkwanye ahụ bụ maka Linga Longa.
Ugwu Kgale bụ ugwu dị elu dị 1.287. N'oge gara aga, ụlọ elu TV dị n'elu ya. Taa ọ bụ ebe a na-eme njem nlegharị anya iji nwee ọmarịcha panoramic nke obodo ahụ. Kgale Hill pụtara: Nnukwu ụra. I rịrị ịrị elu ịrị elu.
Na ngwụsị nke njem anyị na Gaborone anyị nwere Yatch Club, ebe mgbochi mmiri Gaborone dị. A na-eji ya echekwa mmiri, enwerekwa ike ịchọta ntụrụndụ ịme. Mana ọ na-elekwasị anya karịa ndị bi n'obodo ahụ, ebe ọ chọrọ kaadị onye otu ịbanye. Ọ dabara nke ọma anyị jisiri ike banye, ma na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ nleta ngwa ngwa. (N'ihi na enweghi m otu kaadi). Zuru iwepụta ụfọdụ eserese.
Ndi ezigbo mmadu, n’akwa, anyi wuchaa ihe iri anyi ime n’ime Gaborone, isi obodo Botusuana. Achọrọ m ịkele onye ọ bụla na Terra Cotta Guests House, (Modiri, Maggie, Refilwe) n'ihi na ọ bụ ekele gị ka m nwee ike ime njem obodo a ma wetara gị ndị niile na-agụ ya. Daalụ nke ukwuu, si na Enyi gị Brazil “Silva”.
Cheta, njikọ ị nọrọ na họtel ahụ bụ nke a:
Na maka ndị chọrọ ịgbaso blọọgụ anyị ma nye agbam ume, pịa pịa soro na bọtịnụ na-acha ọbara ọbara wee kwado ozi ịntanetị ahụ. Ọ bụ n'efu ma site n'ime nke a ị na-enyere blog a aka ka ọ na-aga. na ewetara gị ọdịnaya ahụ.
Iji mụtakwuo, pịa ụwa dị n'okpuru wee mara posts ndị ọzọ.
Olee otú Botswana botusaneses Gaborone Gaborone Dam Ugwu Kgale ihe ngosi nka Ihe ị ga-eme Walk River Na Cotta Ncheta Dikgosi atọ